China YSR Radar mpamantatra ny fiainana Radar mpanamboatra sy mpamatsy | Topsky
Ny YSR Radar Life Locator dia mampiasa teknolojia radar ultra wideband (UWB) hanatsarana ny mety ho voavonjy aorian'ny fianjeran'ireo rafitra noho ny toetr'andro, afo na fanafihana mahatsiravina, horohoro, tondra-drano, horohoron-tany na loza voajanahary hafa. Ilay mitady ny fiainana
dia mety indrindra amin'ny famonjena aina, ny fitadiavana ireo traboina amin'ny fahatsapana na dia ireo fihetsiketsehana miaina fotsifotsy aza. Maherin'ny 25m ny sangan'ny asa. Ny mpikaroka fiainana YSR Radar dia voaporofo fa fitaovana mahomby amin'ny fitiliana ireo fambara fiainana toy ny fifohana rivotra sy ny fivezivezena amin'ny fananganana toerana fianjerana.
Izy io dia misy sensor Radar sy PDA. Ny Radar dia mandefa ny angona amin'ny PDA amin'ny alàlan'ny WIFI. Ary afaka mamaky ny mombamomba ny PDA ny mpandraharaha. Izy io dia lavitra lavitra, avo lenta ary mora ampiasaina kokoa noho ny fitaovana hafa.
Ny mpikaroka fiainana YSR dia azo ampiasaina betsaka amin'ny horohoron-tany, horohoron-tany, tondra-drano na loza voajanahary hafa.
Azo entina sy maivana
Faritra fitiliana tena tsara
Miasa amin'ny toe-javatra sarotra
Fandidiana mora, tsy mila fampiofanana matihanina
Fepetra takiana ambany
Karazana: radar ultra wideband (UWB)
Famantarana ny fihetsiketsehana: hatramin'ny 30m
Famantarana miaina: hatramin'ny 20m
PDA SIZE: LCD 7 santimetatra
Fitaovana tsy misy tariby: hatramin'ny 100m
Rafitra Windows: windows mobile 6.0
Fotoana hanombohana: latsaky ny 1 minitra
Fotoana bateria: hatramin'ny 10h
Teo aloha: V9 Explosion-proof wireless audio sy video detector fiainana
Manaraka: YSR Explosion-proof multi-mode detector fiainana radara
Kitapo fidirana an-kery elektrika LT-BAT
Single paompy interface tsara hydraulic hydraulic shear ex ...
V9 Fipoahana-porofo tsy misy tariby audio sy horonan-tsary ...